कम्युनिष्ट पार्टीको दिशा अन्धकार तर्फ ! - Sagarmatha Online News Portal
कम्युनिष्ट पार्टीको दिशा अन्धकार तर्फ !
शिवबहादुर बस्नेत ‘राजेन्द्र’ ।
शिवबहादुर बस्नेत ‘राजेन्द्र’ । जतिवेलासम्म पार्टीको दस्तावेज, पार्टीको कार्यदिशा हेरेर पढेर कार्यक्रम लागू गरिन्थ्यो, त्यसबेलासम्म कम्युनिष्ट पार्टी ठीक थियो ।
जुनबेलाबाट दस्तावेज र कार्यदिशा छोडियो अनि पद, प्रतिष्ठा, आम्दानीको श्रोत हेरेर नेताको ढोका चहार्न थालियो कम्युनिष्ट पार्टी पनि समाप्त हुँदै गयो । जनताका समस्या ज्युँका त्युँ रहे । सामाजिक अन्तरविरोधहरु झनझन जटिल बन्दै गए ।
जीवनशैली अपारदर्शी बन्दै गए । पद प्राप्तिको मुख्य लक्ष्य धन सम्पति आर्जन गर्ने बन्न पुग्यो । पदहरु नीजि हुन पुगे । पदहरु व्यक्तिका स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन बन्न पुगे । सांसद, मन्त्री, नेता जनताले बनाउने अनि तिनको किनबेच व्यक्तिगत हुने स्थिति रहदै आयो । हथौडा जस्को हातमा छ चट्टान उसैले फुटाउनु पर्छ र तरवार जस्को हातमा छ मार उसैले हान्नु पर्छ । तर हथौडा र तरवार प्राप्त संस्था र व्यक्तिहरु घ्यु प्राप्तिको होडबाजीमा दौड शुरु गर्न पुगे ।
चट्टान फुटाउने काम चटक्कै छोडिए । जसलाई हथौडा र तरवार जिम्मा लगाइयो त्यो देश र जताका खिलापमा प्रयोग हुदै आयो । नेता बन्नु भनेको ठूलठूला आर्थिक श्रोतमा आफ्नो हिस्सा सुनिष्चित गर्नका निम्ति हुन पुग्यो । पूजिजिविसंग सेयर स्थापित गर्न सक्नेलाई सफल भन्न थालियो । तिनको खिलापमा उभिएर समाजको पक्षमा लिनेलाई असफल भन्न थालियो । एकहातमा दाम अर्को हातमा सान भन्ने प्रवृत्ति ने हासिरहेको छ । न्याय समानता र स्वतन्त्रता भन्ने मन्त्र त उत्पिडितका छेउमा मात्र जप गरिन्छ । दैनिकि त ठूला होटल, साहुमहाजन, ठूला व्यापारी, जनताको कुनै प्रवेश नै नहुने ठाउमा वित्ने गरेको छ ।
‘वस्तुगत परिवेशले नै चेतनाको निर्धारण गर्छ, चेतनाले परिवेशलाई प्रभाव पार्छ ।’ जनताले औषधि, शिक्षा, रोजगारी, नपाएको, बेरोजगार भएको कुरा विर्सने र भन्सारमा कुन कर्मचारी पठाउने? राजदुत कसलाई बनाउने ? कुनकुन वस्तुको भन्सार कसरी निर्धारण गर्ने? कुन उध्योगलाई कसरी बन्द गराउने ? जनताको तर्फबाट आवाज उठाउनेलाई कसरी समाप्त बनाउने ? सामुहिक क्षमतालाई छिन्नभिन्न गर्ने र व्यक्तिलाई देवत्वकरण कसरी गर्ने ? भने विषयमा नै दैनिकि बनिरहेको देखिन्छ । यो हिजोको सपना जनताको भावना विपरित परिस्थिति हो । यो उल्टो दिशातर्फ मडारिदै छ । सुल्टो दिशातर्फ अन्धकारले ढाक्दै छ ।
(बस्नेत नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
Published On: १ भाद्र २०७७, सोमबार